बजारको लिची ढुक्क भएर खानु हुन्छ कि हुँदैन ?
भारतको विहारमा लिची खाएपछि कयौँ केटाकेटीको ज्यान गएको खबर आइरहेको बेला धेरै नेपालीको मनमा स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ -भारतबाट आयातित लिची र अन्य फलफूल निश्चिन्त भएर खान होला कि नहोला ?
सरकारी अधिकारीहरू भन्छन् 'नेपालमा हालै परीक्षण गरिएका स्वदेशी र विदेशी लिची र फलफूलमा विषादीको अवशेष भेटिएको छैन।'
तर जनस्वास्थ्यविद् भन्छन् - नेपालमा विषादीको परीक्षण प्रभावकारी र सर्वव्यापी नभइसकेकोले उपभोक्ताहरूले सावधानी अपनाउनु नै राम्रो हुन्छ।
हालै भारतको विहारमा लिची खाएपछि इन्सेफलाइटिस रोग लागेर कैयौँ बालबालिकाको ज्यान गएका समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालमा पनि लिचीलाई लिएर उपभोक्ताहरू चिन्तित भएका हुन्।
नेपालका बजारमा स्वदेशीसँगै र भारतबाट आयातित लिची समेत बिक्री हुने गरेकोले त्यस्तो चिन्ता बढेको हो ।
लिचीका अतिरिक्त आँप, मेवा, स्याउ, केरा लगायतका फलफूल र ठूलो परिमाणमा तरकारी मुख्यगरी भारतबाट नेपालका बजारमा भित्रिने गरेका छन् ।
पकाउने वा भण्डार गर्ने क्रममा फलफूलमा क्याल्सियम कार्बाइड र माछामा फोर्मलिन नामक रसायन प्रयोग गर्ने गरिएका विवरण नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
नेपालमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका कम्तीमा तीनवटा निकायले खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणको काम गर्दछन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजार अनुगमन गर्दछ। त्यो विभागले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका आफ्ना १२ वटा कार्यालयहरू मार्फत् बजार अनुगमन गरिरहेको बताएको छ।
विभागका महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णका अनुसार विभागले अहिले अन्य खाद्य पदार्थका अतिरिक्त लिची र फलफूलको समेत अनुगमन गरिरहेको छ र 'फलफूलहरू परीक्षण गराएर मात्रै नेपाल भित्र्याउने नियम अनुसार काम भइरहेको छ ।'
त्यसैले, कर्ण भन्छन्, 'लिची खान सकिन्छ तर धेरै खान हुँदैन ।'
कृषि उपजको वैज्ञानिक जाँच गर्न भन्दै हालै अर्को नयाँ निकाय स्थापना गरिएको छ- केन्द्रीय प्रयोगशाला। त्यहाँका प्रमुख कञ्चन पाण्डे प्रयोगशालाले पूर्णता नपाइसकेकोले परीक्षणको काम सुरु नभइसकेको बताउँछन् ।
फलफूल र तरकारीमा विषादी परीक्षणको कुरा आउने बित्तिकै कृषि अधिकारीहरूले जिम्मेवार ठान्ने एउटै निकाय हो -प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र । त्यो केन्द्रले झापा, सर्लाही, काठमाण्डू, कास्की, रुपन्देही, बाँके, कैलालीसहित सात स्थानमा यन्त्रहरू राखी विषादी परीक्षण गर्दै आएको छ।
परीक्षणको नतिजा कस्तो ?
तर ती यन्त्रले फलफूल र तरकारीमा प्रयोग गरिने सबैखाले विषादीको परीक्षण गर्न सक्दैनन्। ती यन्त्रले कार्बामेट र ओर्गानोफोस्फेट वर्गका विषादीको अवशेष मात्र परीक्षण गर्न सक्छन्। त्यसैले नेपालमा बिक्रि हुने फलफूल तरकारी र अन्य खाद्य पदार्थ पूर्ण रूपमा हानीकारक विषादीरहित छन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन ।
लिचीसँज जोडिएको चिन्ताकै सन्दर्भमा, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर डिल्लीराम शर्मा भन्छन्, 'हामीले दुई वर्गका (कार्बामेट र ओर्गानोफोस्फेट) विषादी भए/नभएको मात्रै परीक्षण गर्छौँ। त्यसको नतिजा हेर्दा अहिले लिची र अन्य फलफूलमा ती विषादीको अवशेष भेटिएका छैन ।'
परीक्षण गरिएका फलफूलका नमुनामा अन्य प्रकारका विषादी भए/नभएको प्रष्ट छैन।
प्रश्न उठ्न सक्छस् यदि लिची र फलफूलमा हानिकारक वा हानिकारक मात्रामा विषादी हालिएको रहेछ भने के गर्ने ?
शर्मा भन्छन्, 'फलफूल तरकारीमा विषादी हालिएको रहेछ भने पनि तिनीहरूलाई केही समयसम्म प्रयोग नगरी राख्नु पर्छ। जसलाई कुर्न पर्ने अवधि भनिन्छ। त्यो अवधि पूरा गरेर खाएमा लिची खान सुरक्षित हुन्छ।'
त्यसको अर्थ 'फलफूल तरकारी ताजै खाएको राम्रो' भन्ने सिद्धान्त व्यवसायिक रूपमा उत्पादन गरिने फलफूल तरकारीको हकमा लागु हुँदैन।